Gionee Archives - Mobiles Khabar
९ बैशाख २०७५, आईतवार १९:२७ Comments Off on जियोनीका नयाँ स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक हुँदै, नयाँ फीचरसहित अाउने
काठमाडौं । जियोनीले नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले नयाँ रेन्जका स्मार्टफोनहरु विश्व बजारमा ल्याउने भएको हो । चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी जियोनीले भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर नयाँ फोनहरु ल्याउन लागेको हो जुन बजेट स्मार्टफोन र मिड रेन्जको स्मार्टफोनको रुपमा आउने छ । विगत वर्षदेखि निकै समस्यामा परेको जियोनीले चीनसहित अन्य बजारमा पनि नयाँ उत्पादन ल्याउन नसक्दा बजार ...
जिओनीको बेजेल-लेस स्मार्टफोन ‘एम ७ पावर’ आउँदै
२० कार्तिक २०७४, सोमबार २०:३४ Comments Off on जिओनीको बेजेल-लेस स्मार्टफोन ‘एम ७ पावर’ आउँदै
काठमाडौं, २० कात्तिक । चीनियाँ स्मार्टफोन मेकर कम्पनी जिओनीले नेपालमा एम ७ (Gionee M7 Power) स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो जिओनीको पहिलो बेजेल–लेस स्मार्टफोन हो । कम्पनीले एम सेभेन पावर स्मार्टफोन फूलभ्यू डिस्प्ले (‘FullView’ Display) स्मार्टफोनको रुपमा नेपाली बजारमा ल्याउन लागेको हो । यो स्मार्टफोन विशेष गरि नेपालसहित भारतीय बजारमा पनि एकैपटक सार्वजनिक हुनेछ । यो नेपाली ...
जिओनीको चाडपर्वका लागि विशेष योजना, ५ दिन ४ रातको सिंगापुर ट्रिप उपहारमा
२५ भाद्र २०७४, आईतवार १९:५४ Comments Off on जिओनीको चाडपर्वका लागि विशेष योजना, ५ दिन ४ रातको सिंगापुर ट्रिप उपहारमा
काठमाडौं, २५ भदौ । आउँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी जिओनीले यसपाली पुन ‘जिओनी उत्सव खुसियाली सिंगापुर यसपाली’ योजना ल्याएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुसँगै खुसियाली साट्ने उद्देश्यले ग्राहक लक्षित यो उत्साहजनक योजना ल्याइएको हो । योजना अनुसार प्रत्येक जियोनी मोवाइल सेट खरीद गर्ने ग्राहकले एउटा स्क््रयाच कार्ड प्राप्त गर्नेछन् । यस स्क्रयाच कार्डमार्फत जिओनीका एक्सक्लुसिभ उपहार, १२ जना ग्राहकले जिओनी मोवाइल ...
यस्तो छ जिओनीको एस१० प्लस स्मार्टफोन, रियर र सेल्फी दुबैमा ड्यूल क्यामरा
२५ बैशाख २०७४, सोमबार १६:१४ Comments Off on यस्तो छ जिओनीको एस१० प्लस स्मार्टफोन, रियर र सेल्फी दुबैमा ड्यूल क्यामरा
काठमाडौं, २५ बैशाख । जिओनीले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्मार्टफोन जिओनी एस ९ (Gionee S9) को सक्सेसर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले एस ९ को सक्सेसरको रुपमा एस १० (Gionee S10) स्मार्टफोन तयारी गरिरहेको रिपोर्ट आएको छ । करिब ६ महिना अघि सार्वजनिक भएको जिओनी एस ९ को अपग्रेड भर्सन जिओनी एस १० को रुपमा ल्याउन लागेको हो । ...
जिओनीको एम सिक्स एस प्लस विश्व बजारमा आउँदै, ६ जीबी र्याम र हेलियो पी१० चीप
४ बैशाख २०७४, सोमबार १२:५२ Comments Off on जिओनीको एम सिक्स एस प्लस विश्व बजारमा आउँदै, ६ जीबी र्याम र हेलियो पी१० चीप
काठमाडौं, ४ वैशाख । नेपाली बजारमा जिओनीले ए वान स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिरहेको बेला फेरी जिओनीको नयाँ स्मार्टफोनको चर्चा चलेको छ । नेपाल र भारतमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको जिओनी ए वान तथा ए वान प्लस स्मार्टफोन ग्राहकहरुले निकै सोधखोज गरेको कम्पनीले बताईरहेको बेला चीनमा भने नयाँ मोडलको बारेमा जानकारी लीक भएको छ । सोमबारदेखि बजारमा उपलब्ध भएको जिओनी ए वान ...
४ बैशाख २०७४, सोमबार ११:१४ Comments Off on जिओनी ए वान स्मार्टफोन बजारमा, ४ जिबी र्याम र १६ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा
काठमाडौं, ४ वैशाख । तपाईँ नयाँ स्मार्टफोन किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने जिओनीले नयाँ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । नेपाली बजारमा लोकप्रिय ब्राण्डको रुपमा रहेको जिओनीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर नेपाली ग्राहकहरुको लागि ए वान (Gionee A1) स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । जिओनीले ए सिरिजमा विश्व बजारमा ल्याएको पहिलो स्मार्टफोनहरु जिओनी ए वान (Gionee A1) तथा ए वान प्लस (Gionee A1 ...
जिओनी ए वान स्मार्टफोन अफलाइनमा प्रिबुकिंग गर्दा १ हजार रुपैयाँ छुट पाइने
२५ चैत्र २०७३, शुक्रबार १७:०५ Comments Off on जिओनी ए वान स्मार्टफोन अफलाइनमा प्रिबुकिंग गर्दा १ हजार रुपैयाँ छुट पाइने
काठमाडौं, २५ चैत । जिओनी ए वान र ए वान प्लस स्मार्टफोन नेपाल र भारतमा एकै पटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा प्रि-बुकिंग शुरु गरिसकेको कम्पनीले हाल अफलाइनमा प्रि-बुकिंग शुरु गरेको छ । कम्पनीले यहि अप्रिल ११ तारिखसम्म जिओनी ए वान स्मार्टफोन अफलाइनमा प्रि-बुकिंग शुरु गरेको हो । यो स्मार्टफोन प्रि-बुकिंग गर्नेलाई कम्पनीले विशेषरुपमा १००० रुपैयाँको छुट दिने ...
जिओनी ए वान स्मार्टफोन किन्दा २ वर्षको वारेन्टी पाइने !
१३ चैत्र २०७३, आईतवार १८:५३ Comments Off on जिओनी ए वान स्मार्टफोन किन्दा २ वर्षको वारेन्टी पाइने !
काठमाडौं, १३ चैत । जिओनीको नयाँ ए सिरिजमा हालै मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा सार्वजनिक गरिएको जिओनी ए वान (Gionee A1) र ए वान प्लस (A1 Plus) स्मार्टफोन नेपाल र भारतमा एकै पटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले नेपालमा यसको प्रि-बुकिंग शुरु गरिसकेको छ भने भारतीय बजारमा मार्च ३१ तारिखदेखि मात्र प्रि-बुकिंग गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपालमा भन्दा पहिले ...
६ चैत्र २०७३, आईतवार १९:१५ Comments Off on नयाँ स्मार्टफोन किन्नेभए जिओनीको ए वान आउँदै, ५ हजार रुपैंयामै प्रिबुक गर्न सकिने
काठमाडौं, ६ चैत । जिओनीले हालै मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा सार्वजनिक गरेको चर्चित स्मार्टफोन ए (Gionee A1) वानको प्रि बुकिंग शुरु गरेको छ । कम्पनीले विश्वबजारमा पहिलो पटक नेपालमा प्रि-बुकिंग शुरु गरेको हो । कम्पनीले नेपाली बजारमा कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट तथा फेसबुकका साथै सस्तोडिलसँग एक्सक्लुसिभ प्रि-बुकिंग शुरु गरेको छ । सो प्रि-बुकिंगमा ग्राहकहरुले ५,००० रुपैयाँ तिरेर फोन बुकिंग गर्न सक्नेछन् । ...
१७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १८:२३ Comments Off on जिओनी ए सिरिजका स्मार्टफोन विश्वमै सबैभन्दा पहिले नेपाली बजारमा आउने
काठमाडौं, १७ फागुन । जिओनीले ए सिरिजका पहिलो स्मार्टफोनहरु जिओनी ए वान (Gionee A1) तथा ए वान प्लस (Gionee A1 Plus) सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक ए सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोनहरु ल्याएको हो । यी दुबै स्मार्टफोनहरु सबैभन्दा पहिले नेपाल र भारतीय बजारमा सार्वजनिक हुनेछन् । नेपालमा भने यो मार्चको १५ तारिखको हाराहारी अर्थात चैतको शुरुवातीमा बजारमा उपलब्ध हुने ...